Huawei FreeBuds 4, turxaan -bixinta badeecad ku dhowaad kaamil ah [Dib u eegis] | Wararka Gadget
Qalabka 'Actualidad Gadget' waxaan mar labaad kuugu soo qaadannaa alaab maqal ah, waad ogtahay inaan dooneyno inaan kugula socodsiino wararka dhammaan heerarka kala duwan, Huawei waa mid ka mid ah soosaarayaasha bixiya beddello badan oo kala duwan oo qiimayaal kala duwan ah. Ka dib guushii FreeBuds 3, Huawei wuxuu dib u sifeeyaa moodelkii wuxuuna ka dhigayaa mid ku dhawaad ​​kaamil ah.
Nala soo hel Huawei FreeBuds 4 cusub, taleefoonnada cusub ee TWS oo leh baajinta buuqa ugu firfircoon. Waxaan ku falanqeynaa dhammaan astaamaheeda, awoodeeda iyo daciifnimadiisa dib-u-eegista qotada dheer, miyaad seegaysaa? Waxaan si buuxda u hubnaa in maya, nagu soo biir falanqayntaan cusub.
Haddii aad eegto daraasiin faallooyin waxaad arki doontaa in falanqeeyayaal badani isku raacsan yihiin in Huawei Budada Bilaashka ah 4 Waxay yihiin taleefoonnada gacanta ee ugu tayada wanaagsan suuqa markaan ka hadlayno gaar ahaan kuwa dhagaha la gashado ee furan, laakiin waxaan jecelnahay inaan ku siinno ra'yigayaga shaqsiyeed, tanna waa inaan si qoto dheer u tijaabino… Aynu tagno!
Ma jeceshahay iyaga? Ku iibso qiimo dhimis ilaa 20% ah Amazon.
1 Ode si aad u samaysato sameecadaha dhagaha
3 Tayada codka iyo duubista "hache-dé".
4 Is-maamul iyo fikradda tifaftiraha
Ode si aad u samaysato sameecadaha dhagaha
Dhegaha-dhegaha dhegta ayaa aad u wanaagsan, gaar ahaan way fiican yihiin haddii aadan iska tuurin, gaar ahaan haddii aad leedahay mid ka mid ah dhegahaas yar oo injineerada naqshadeynta shirkaduhu u muuqdaan inay tixgeliyaan markay samaynayaan taleefoonadooda TWS, aad bay u wanaagsan yihiin si loo fuliyo baajinta buuqa firfircoon ee tayada leh. Huawei waxay ka fikirtay dhammaan isticmaaleyaasha leh cadaawadda dhegaha-dhegaha dhegaha midkood sababtoo ah way na daadiyaan ama way na dhaawacaan, waxayna go'aansatay inay nala soo xiriirto baajinta buuqa firfircoon ee kuwan Huawei FreeBuds 4, ku dhawaad ​​waxay la mid tahay Huawei FreeBuds 3 xagga naqshadeynta, oo aan si dhab ah ugu fikiray inay tahay ikhtiyaarkayga shaqsiyeed oo keliya. Iyada oo ay taasi jirto, haddana Podcast -ka aan ku kaashaneyno Actualidad iPhone waxaad awoodi doontaa inaad ogaato inaan isticmaalayay Huawei FreeBuds 4i muddo bilooyin ah, khiyaanooyinka aayaha (waa inaanan waligey siin Huawei FreeBuds 3).
Midabada la heli karo: Caddaan iyo lacag
Gacmo silikoon: Cagaar, oranji, buluug iyo madow
Iyada oo leh astaantooda "furan", FreeBuds 3 waxay fadhiyaan dhegta, iyadoon dhicin, adiga oo aan ku go'doomin, adiga oo aan ku dhibin. Waxaan leenahay cabbirkii dhegeysiga 41,4 x 16,8 x 18,5 mm kaliya 4 garaam, halka kiiska dacwada, kaas oo u xuubsiibtay xoogaa xoogaa ka xoog badan kii hore, wuxuu joogaa 58 x 21,2 milimitir 38 garaam (marka uu faaruq yahay).
Natiijadu waa raaxo aan hore loo arag oo dhegaha la gashado, iyo nashqad ku jirta sanduuqa oo ka dhigaysa saaxiibka kuwa surwaallada dib-u-dheggan ee aan maanta xiranno, ma dhibayso, waxaa si fudud loogu shaqeeyaa hal gacan iyo tayada dhismaha, sida caadiga ah ee Huawei, gaar ahaan way wanaagsan tahay.
Wax badan baan kuu sheegay, oo ficil ahaan waxba kumaan odhan. Fasalka oo aad u horumarsan waxaan siin doonaa taxane xog xiiso leh, aan ka hadalno sifooyinka farsamada. Waxaan leenahay Bluetooth 5.2, Huawei waxaa ka go'an nuqulkii ugu dambeeyay ee laga heli karo suuqa si loo yareeyo daahitaannada loona hagaajiyo isku xirnaanta. Sida aaladaha kale ee FreeBuds waxaan ku lammaaneynaa furitaanka soo-furka, taas oo ah, is-waafajinta otomaatiga ah ee aaladaha Huawei (EMUI 10 ama ka sareeya), waxaan u malayneynaa taas oo leh guntin NFC xaddidan.
Waxaan haynaa darawal 14,3 milimitir ah cutub kasta oo ballan qaadaya dhawaaq qeexitaan sare, dhegta kasta waxay leedahay matoor u gaar ah si ay u soo saarto gariir ka weyn diaphragm -ka, tani waxay u tarjumaysaa bas kaas oo la yaabi doona kuwa jecel muusikada ganacsiga, markaa si faahfaahsan ayaan uga hadli doonnaa nooca dhawaaqa. Xaddiga soo noqnoqda, mahadsanid maamulaha LCP waa ilaa 40 kHz, markaa timbres -ka iyo qoraalada sare ayaa la xoojiyaa.
Tayada codka iyo duubista "hache-dé".
Tayada codkeedu waa mid aan muran lahayn, waan haynaa Baas si gaar ah loo xoojiyay (baas) iyo kuwa jecel muusikada ganacsiga oo aad u yar ayaa awoodi doona inay ku jiraan barnaamijka AI Life ee Huawei, oo loo heli karo Android iyo macruufka labadaba. Waxaan haynaa qaar ka mid ah qoraallada sare iyo kuwa dhexe ee ugu wanaagsan ee aan dhadhaminay ilaa maanta, gaar ahaan sameecadaha dhagaha ee furan, halkaas oo ay wax u dhimi karto dhawaqa jawiga ama dhalanrog. Huawei ayaa ku duubtay loopka tayada codka maqalka dhagaha haddii aan u aragno inay "furan yihiin", wax aysan dadka oo dhan u bogi doonin.
Maadaama Huawei uusan dooneynin inuu ka tago isticmaaleyaasha diida dhagaha-dhegaha dhegaha, waxay go'aansatay inay sii waddo ka shaqeynta meel ay noocyo badan oo kale horay uga tageen si toos ah ANC 2.0 oo ballanqaadaysa illaa 25db oo ah baajinta buuqa iyada oo aan loo baahnayn in dhegaheena la geliyo caag dhibsanaya. Maadaama dheg walba ay ka duwan tahay, dareemayaasha iyo makarafoonnada FreeBuds 4 ayaa falanqeyn doona oo bixin doona is -beddello taxane ah oo oggolaanaya baajinta buuqa ugu fiican.
Way adag tahay haddii aysan suurtagal ahayn in la ogaado haddii dhab ahaan dhammaan ballanqaadyadan la fulinayo isku mar, waxa kaliya ee aan ku xukumi karno waa baajinta buuqa, waxaanan xaqiijinayaa aniga oo aan ka baqaynin inaan khaldamo inay taasi tahay ugu wanaagsan ee abid ku qalabaysan dhegeysiga 'furan', leh faraq badan. Si dhib leh uma arko faragelinta tayada maqalka iyo baajinta ayaa ka badan ku filan isticmaalka maalinlaha ah.
Waxay kaloo leeyihiin 48 kHz duubista HD mahadsanid laba hab oo qaabeynta:
Deegaanka: Ku qabso dhawaaqyada kugu xeeran stereo
Codadka: Aqoonsiga soo noqnoqoshada codka, waxay sifeyn doontaa kala duwanaanshaha waxayna ka tagi doontaa bay'ada asalka
Way adag tahay in la sharaxo Waxaan kugula talinayaa inaad fiiriso fiidiyaha Androidsis kaas oo aan ku samaynayno tijaabada codka makarafoonnada. Waxaad ku iibsan kartaa qiimaha ugu fiican iyo kharashyada maraakiibta, ha ilaawin.
Is-maamul iyo fikradda tifaftiraha
Waxaan leenahay ismaamul guud oo ah 4 saacadood dhegeysigii oo dhan iyadoo ANC la damiyo iyo 2,5 saacadood oo ANC shidan tahay. Iyada oo kiiska si buuxda loo soo dallacay waxaan imaan doonnaa 22 saacadood ANC la'aan iyo 14 saacadood oo ANC la dejiyay. Tijaabooyinkayagu waxay si aad ah ugu dhowaadeen madax -bannaanida ay bixiso Huawei, oo ballan -qaadaysa 2,5 saacadood oo dib -u -ciyaar ah 15 daqiiqo oo lacag ah. Sida iska cad, waxaan haysanaa lacag -bixin wireless (haddii aan bixinno 20 euro oo dheeri ah ...).
Sidan, Huawei FreeBuds 4 waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican (aragtidayda ugu fiican) ikhtiyaarka furayaasha TWS ee furan sababtoo ah tayada, wax soo saarka iyo is waafajinta. Waxay ku iibinayaan Amazon, waxaad ka iibsan kartaa 119 euro (Qiimaha caadiga ah ee 149 euro), iyo sidoo kale websaydhka rasmiga ah ee Huawei.
Budada Bilaashka ah 4
Ku dhejiyay: 18 August 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: 8 September ee 2021
Qalabka, naqshadeynta, raaxada iyo soo saaridda
Joojinta buuqa firfircoon
Tayada / Qiimaha
Sanduuqa si fudud ayaa loo xoqaa
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Huawei FreeBuds 4, turxaan -bixinta badeecad ku dhowaad kaamil ah [Dib u eegis]
SPC Smartee Boost, saacad caqli badan oo qiimo aad u macquul ah leh